🥇 ▷ Shaqaalaha Samsung ayaa sidoo kale ku jahwareersan Galaxy S6 oo leh iPhone 6 ✅
Shaqaalaha Samsung ayaa sidoo kale ku jahwareersan Galaxy S6 oo leh iPhone 6
Samsung dhexdeeda way ka xishoodaan inay qirtaan inta Galaxy S6 ilaa iPhone 6
In a dib u eegis lagu sameeyay Samsung Galaxy S6 iyo Galaxy S6 Edge Bogga intarnetka ee Engadget, Chris Velazco wuxuu u sheegay anopdote xiiso leh oo dhacay intii lagu gudajiray tijaabada mid ka mid ah af hayeenada Samsung. Waxaa soo baxday in saxafiga uu ku sugnaa kulanka tijaabada Samsung Galaxy S6 isla markaana hal mar uu shaqaalaha Samsung qaatay iPhone 6 oo inbadan ay qaadatay in la ogaado in uu haysto mobilada tartamaya.
Samsung miyuu ka sawirayaa naqshada iPhone-ka cusub Apple?
Waxyaabaha la midka ah ee naqshada Samsung Galaxy S6 iyo iPhone 6 ma yara, inbadan waxay iftiimisay hawada isu eg ee labada qalabba leeyihiin, laga bilaabo badhanka guriga oo leh taabashada taabashada ilaa meesha ay badhamadu mugga iyo batoonka korantada dhinaca midig ee aaladda.
Waxay umuuqataa taasi Qaar ka mid ah shaqaalaha Samsung ayaa dhibaato ku qaba ogaanshaha haddii ay isticmaalayaan iPhone 6 ama Samsung Galaxy S6, wax ay tahay inay soo jiitaan dareenka maadaama ay yihiin labo ka mid ah labada aaladaha ugu muhiimsan uguna sarreeya suuqa oo ay leeyihiin laba shirkadood oo had iyo jeer ku dhex kaydsan dukaamada iyo maxkamadaha.
Samsung waxay go’aansatay inay ka guurto naqshadaha caaga ah ee caanka ah ee qoyska reer Galaxy iyo S6-da cusub ee la mid ah ee ay la socdaan taleefanka casriga ah ee Apple Waxay yihiin kuwo aad iyo aad u tiro badan. Muuqalku wuxuu bilaabmayaa in lagu dareemo cidhifyada iyo meesha badhamada. Sidoo kale doorashada xulashada jirka aan dhiig qabin ee leh batteriga isku dhafan, wax caan ku ah Apple laakiin taasi ilaa iyo hadda laguma adeegsan taleefannada Samsung ee aadka u sareeya.
Qabanqaabinta walxaha qalabka ee labada aaladoodba waa isku mid
Waxyaabaha ay isla egyihiin ee u dhexeeya Samsung Galaxy S6 iyo iPhone 6 kaliya ma jahwareerin shaqaalahooda, mid ayaa geli kara dukaan, wada arki karnaa waxayna qaadan doontaa dhowr daqiiqo si aan u kala soocno sababtoo ah xitaa waxay leeyihiin kuwa ku hadla afafka isla iyo aagagaba. naqshad isku mid ah. Iyagu waa aalado khafiif ah oo lagu sameeyay qalab tayo sare leh, waxay leeyihiin dareemayaal dhaqdhaqaaqa iyo dareemayaal faraha ku jira badhanka guriga si ay u bixiyaan nabadgelyo weyn marka la furayo codsiyada iyo adeegyada qaarkood.
Go’aanka Samsung ee ku saabsan xaqiiqda ah in batariga aan la saari karin ayaa laga yaabaa inuu ka mid yahay qodobbada ugu xiisaha badan, oo ay weheliso isticmaalka birta, maadaama isticmaaleyaashu muddo dheer ayey ka cabanayeen nooca qalabka ay Samsung u adeegsato aaladaha sare ee aadka u dheer muddo dheer oo kuwanu waxay u muuqdeen inay iska indhatirayaan sheegashadii macaamiishooda
Ma waxaan wajahaynaa cashuur ama nuqul fudud oo u aqoonsanaya isaga Apple naqshaddaada ugu fiican?